प्रहरीले समाएको १५ किलो सुनमध्ये आधा किलोमात्रै सक्कली कसरी भयो ? – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/प्रहरीले समाएको १५ किलो सुनमध्ये आधा किलोमात्रै सक्कली कसरी भयो ?
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले अबैध रुपमा भित्र्याएको १५ केजी सुन वरामद गरेको थियो । सेता स्कारपियो गाडीलाई रोक्न खोज्दा नरोकी हिड्न खोजेपछि पिछा गर्दा त्यो गाडीवाट सेतो झोला फालियो । त्यसमा १५ केजी सुन थियो । तर त्यो सुन नक्कली भएको पुष्टि भएको छ ।